Chii icho, inogadzirwa sei uye chii chinoshandisa iyo photovoltaic simba rezuva rine? Green Renewables
Chii icho, inogadzirwa sei uye ndeapi mashandisiro e photovoltaic simba rezuva
Kunyangwe zvisaririra zvemafuta zvichiri kutonga pasi redu nhasi, zvinowedzerwazve zviri kuwana nzira yavo mumisika yenyika dzese dzepasi. Simba rinowedzerwazve ndere iro risingasvibise nharaunda, risingapere uye rinokwanisa kubatisa simba rezvinhu zvepanyika nenzvimbo dzakatenderedza, senge zuva, mhepo, mvura, nezvimwe. Kugadzira magetsi. Sezvo mafuta emafuta ave kuda kupera, zvinowedzerwazve inguva yemberi.
Nhasi tichataura zvakadzama nezve photovoltaic simba rezuva. Iri simba, pamwe, ndiro simba rinonyanya kushandiswa pasi rose mumunda wezvinogona kudzorerwa. Iwe unoda kuziva kuti inoshanda sei uye nemashandisirwo akasiyana ainayo?
2 Photovoltaic simba rezuva rinogadzirwa sei?
3 Elements uye kuita
4 Zvishandiso zve photovoltaic simba rezuva
4.1 Photovoltaic masystem akabatana neiyo gridhi
4.2 Kumwe kushandiswa kwe photovoltaic simba rezuva
Tisati tatanga kurondedzera mashandisiro ayo uye zvivakwa, ngatitsanangurei kuti chii photovoltaic simba rezuva nderevaya vasati vanyatso kuziva. Simba rezuva ndozvairi izvo inokwanisa kushandisa simba rezuva kubva pane zvidimbu zvechiedza kuburitsa simba iyo yakazoshandurwa kuita magetsi. Aya manyuko esimba akachena chose, saka haasvibise nharaunda kana kuburitsa magasi anokuvadza mudenga. Uye zvakare, ine mukana wakakura wekuvandudzwa, ndiko kuti, zuva harisi kuzopera (kana zvirinani kwemabhirioni emakore mashoma).
Kutora simba rezuva, magetsi ezuva anoshandiswa anokwanisa kutora mafotoni echiedza kubva kumwenje yezuva nekuashandura kuita simba.
Photovoltaic simba rezuva rinogadzirwa sei?
Sezvambotaurwa, kugadzira photovoltaic simba, zvinodikanwa kutora mafoto emwenje ane mwaranzi yezuva uye kuushandura kuita magetsi kuti uushandise. Izvi zvinogona kuwanikwa ne iyo photovoltaic shanduko maitiro kuburikidza nekushandisa kwepaneru yezuva.
Iyo solar panel ine sechinhu chakakosha chinhu photovoltaic cell. Iyi semiconductor zvinhu (zvakagadzirwa nesilicon, semuenzaniso) izvo zvisingade zvikamu zvinofamba, hapana mafuta, kana inogadzira ruzha. Kana iri sero rephotovoltaic richienderera mberi richionekwa pachiedza, rinotora simba ririmo mumaphotoni echiedza uye rinobatsira kugadzira simba, richiisa maelectron akabatwa nemunda wemagetsi wemukati. Kana izvi zvikaitika, maerekitironi anounganidzwa pamusoro pechiso che photovoltaic cell inogadzira inoenderera magetsi magetsi.
Sezvo kubuda kwemagetsi emagetsi maseru e "photovoltaic" ari mashoma kwazvo (0,6V chete), anoiswa mune akateedzana emagetsi obva avharirwa mugirazi regirazi kumberi uye chimwe chinhu chinopesana nemumvuri kumberi. Kumashure (kubvira ruzhinji yenguva iyo ichave iri mumumvuri).
Kubatana kweakateedzana maseru e photovoltaic uye akafukidzwa nezvinhu zvataurwa gadzira module ye photovoltaic. Padanho iri iwe unogona kutotenga chigadzirwa kuti uchinje kuita solar panel. Zvinoenderana nehunyanzvi uye mhando yekushandisa yaigadzirwa, iyi module ine nzvimbo yepamusoro ye0.1 m² (10 W) kusvika 1 m² (100 W), avhareji inoratidza kukosha, uye inoderera voltages ye12 V, 24 V kana 48 V zvichienderana nechishandiso.
Sezvambotaurwa pamusoro, kuburikidza neiyo photovoltaic shanduko maitiro, simba rinowanikwa mune yakadzika kwazvo voltages uye mune yakananga ikozvino. Simba iri harigone kushandiswa pamba, saka zvinodikanwa kuti, gare gare, a inverter yemagetsi kuti ishandure ichichinjisa zvazvino.
Elements uye kuita
Midziyo iyo iyo maseru e photovoltaic aripo anonzi mapaneru ezuva. Aya mapaneru ane akawanda mashandisiro. Ivo anoshandiswa kugadzira simba ese ari maviri ari ega, emhuri uye emabhizinesi nzvimbo. Mutengo waro mumusika wakakomberedza 7.000 euros. Kubatsira kukuru kwemaseru ezuva nderekuti kumisikidza kwavo kuri nyore kwazvo uye kunoda kushomeka. Ivo vane hupenyu hweanosvika makore makumi maviri nemashanu, saka kudyara kwacho kwakanyatso kuwanikwa.
Aya magetsi ezuva anofanirwa kuiswa munzvimbo chaiyo. Ndokunge, munzvimbo idzodzo dzakatarisana nenhamba huru kwazvo yemaawa ezuva pazuva. Nenzira iyi tinogona kushandisa zvakanyanya simba rezuva nekugadzira magetsi akawanda.
Girazi rezuva rinoda bhatiri iyo inochengetedza simba rakagadzirwa kuti rishandise mumaawa iwayo kana pasina chiedza chezuva (senge husiku kana pamakore kana makore ekunaya).
Nezve mashandiro eiyo photovoltaic kuisirwa kwezuva, zvinogona kutaurwa kuti zvinoenderana zvachose nekutarisisa kwemasolar panels, kuiswa uye nenzvimbo yenzvimbo kwainoiswa. Maawa akawanda ekupenya kwezuva munzvimbo iyi, simba rakawanda rinogona kugadzirwa. Mazhinji ekuisa ezuva anowanisa mari yavo mukati memakore masere. Kana hupenyu hunobatsira hwemagetsi ezuva ari makore makumi maviri nemashanu, unozvibhadharira wega uye iwe unowana inopfuura yakakwana purofiti.
Zvishandiso zve photovoltaic simba rezuva
Photovoltaic masystem akabatana neiyo gridhi
Imwe yemashandisirwo makuru eiyo photovoltaic simba rezuva ndiko kuiswa kweiyo photovoltaic sensor uye ino inverter inokwanisa kushandura iyo inopfuurira simba inogadzirwa mumatanho ezuva kuti iite inochinjika yazvino kuti izviise mugiridhi yemagetsi.
Mutengo pa kWh yesimba rezuva inodhura kupfuura mamwe masisitimu echizvarwa. Kunyangwe izvi zvachinja zvakanyanya nekufamba kwenguva. Mune dzimwe nzvimbo uko kuwanda kwemaawa ezuva kwakakwira, mutengo we photovoltaic simba rezuva ndere rakaderera. Izvo zvakakosha kuti iwe uve nemari uye yezvemutemo mitsara yekubatsira kudzikisa mutengo wekugadzira. Pakupera kwezuva, isu tiri kubatsira nyika yedu kuti irege kusvibiswa uye kudzivirira shanduko yemamiriro ekunze uye kusvibiswa.
Kumwe kushandiswa kwe photovoltaic simba rezuva
Chiedza. Kumwe kushandiswa kwe photovoltaic simba rezuva kuri kuvhenekera pamisuo mizhinji yemusha, nzvimbo dzekuzorora, uye mharadzano Izvi zvinoderedza mwenje mutengo.
Kusaina. Rudzi urwu rwesimba runoshandiswa nekuwedzera huwandu hwekuratidzira munzira dzemigwagwa.
Telecommunication. Simba iri rinoshandiswa mune dzakawanda nguva kuminda yevanodzokorora magetsi emagetsi, redhiyo uye terevhizheni.
Rural magetsi. Nerubatsiro rwehurongwa hwepakati, maguta akapararira nemisha midiki vanogona kunakidzwa nemagetsi anovandudzwa.
Mapurazi nezvipfuyo. Zvekushandisa simba munzvimbo idzi, photovoltaic simba rezuva rinoshandiswa. Kuti uvhenekerwe, tyaira mvura uye pombi dzekudiridza, dzekukama mukaka, nezvimwe.
Sezvauri kuona, photovoltaic simba rezuva rinoshandiswa munzvimbo zhinji dzinoita kuti riwedzere kukwikwidza mumisika uye inoonekwa semberi yesimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Photovoltaic Solar Energy » Chii icho, inogadzirwa sei uye ndeapi mashandisiro e photovoltaic simba rezuva